Ukufumana kwakhona SQL Server Idatha evela kwiifayile zeDiski yoMatshini oSebenzayo, iiFayile zoGcino kunye neeFayile zeDisk
Ikhaya iimveliso DataNumen SQL Recovery Ukufumana kwakhona SQL Server Idatha evela kwiifayile zeDiski yoMatshini oSebenzayo, iiFayile zoGcino kunye neeFayile zeDisk
ukuba yakho SQL Server Ifayile ye-MDF / NDF igcinwe kule fayile ilandelayo:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ifayile (*. Vmdk). Umzekelo, uyigcina SQL Server Ifayile ye-MDF / NDF kwidiski ebonakalayo kwi-VMWare.
Ifayile yeVirtual PC VHD (i-Virtual Hard Disk) ifayile (*. Vhd). Umzekelo, uyigcina SQL Server Ifayile ye-MDF / NDF kwidiski ebonakalayo kwi-PC eyiyo. Okanye wenza ugcino lwefayile yakho SQL Server Ifayile ye-MDF / NDF nge-Windows Backup kunye nokubuyisela umsebenzi.
kwaye awukwazi ukufikelela kwidatha kwifayile ye-MDF / NDF ngezizathu ezithile, umzekelo:
Ucima eyakho SQL Server Ifayile ye-MDF / NDF kwi-disk ebonakalayo kwi-VMWare okanye kwi-PC eyiyo.
Ifayile yogcino kwimithombo yeendaba yogcino yonakele okanye yonakele kwaye awukwazi ukubuyisela ifayile yakho ye-MDF / NDF kuyo.
Ifayile yomfanekiso wediski yonakele okanye yonakele kwaye awukwazi ukuyifumana kwakhona ifayile yakho ye-MDF / NDF kuyo.
Emva koko usenakho ukubuyisa idatha kwifayile ye-MDF / NDF ngokuskena kunye nokufumana kwakhona iifayile ezihambelana nomatshini wediski, ifayile yogcino okanye ifayile yediski enayo DataNumen SQL Recovery. Khetha nje ifayile yomatshini wediski ebonakalayo, ifayile yogcino okanye ifayile yediski njengefayile yomthombo eza kulungiswa, DataNumen SQL Recovery iya kuskena ifayile yomthombo, uyihlalutye, iphinde ifumane ifayile SQL Server idatha egcinwe kwifayile, kwaye uyikhuphe kwifayile entsha ye-MDF emiselweyo okanye isicatshulwa esicacileyo sefayile yesitatimende se-SQL enokusetyenziselwa ukwakha kwakhona isiseko sedatha.
Ukuba ifayile yakho ye-MDF / ye-NDF igcinwe kwi-hard disk okanye kwi-drive, kwaye awukwazi ukufikelela kwifayile ye-MDF / NDF ngezizathu ezithile, umzekelo:
Ucima eyakho SQL Server Ifayile ye-MDF / NDF kwi-hard disk okanye kwi-drive.
Emva koko unokusebenzisa DataNumen Disk Image ukwenza umfanekiso wediski okanye idrive, emva koko ubuyise idatha ye-MDF / NDF kwifayile yomfanekiso nge DataNumen SQL Recovery.